वातावरण मा अझै सुधार नआएकाले थप ७ दिन विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ? - Nepali in Australia
April 3, 2021 EditorLeaveaComment on वातावरण मा अझै सुधार नआएकाले थप ७ दिन विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ?
२०७७ चैत २०, काठमाडौँ । नेपाल मा अहिले बाक्लो तुयेलो ले गर्दा आम सर्वसाधारण जनताले दुःख भोग्नु परिरहेको छ। यसको कारणले सिक्षा मन्त्रालय द्वारा ४ दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो अबस्था रहिरहेका ले पुन ७ दिनका लागी शैक्षिक सस्था बन्द हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबारेमा औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी रहेको जानकारि मा उल्लेख छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
हामीलाई थाहा छ, कोरोना डरलाग्दो महामारी हो । तर बिगतमा हामीले कोरोना बिरुद्ध कसरी लड्यौ, याद छ ? देशभरमा ४ जनालाई कोरोना देखिँदा हामी डराएर घरभित्र बस्यौं अनि दिनमा ४ हजारलाई कोरोना देखिँदा खुलेआम हिड्न थाल्यौं । मास्क लगाउने कि नलगाउने पनि मतलब हुन छोड्यो । होटेल, यातयात अनि अन्य सबै ब्यवसाय खुल्न थाले । मानिसहरु जमघट, भेला, आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
छिमेकी देशहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेपालमा फेरि लकडाउन गर्ने कुरा आइरहेको छ । अब फेरि कति महिना डराएर घरभित्रै बस्नुपर्ने हो ? भर्खरै स्कुल जान थालेका विद्यार्थीहरुको स्कुल जाने रहर फेरि पुरा नहुने हो कि? अनि परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुको परीक्षा नै नहुने हो कि? बिहान काम गरेर बेलुकी पेट पाल्ने मजदुरहरु फेरि भोक भोकै हिडेर घर फर्कनु पर्ने हो कि ? लामो समय थला परेर बिस्तारै उठ्दै गरेका ब्यापार अनि ब्यवसायहरु फेरि बन्द हुने हुन् कि ?****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
जेठदेखि सवारी अनुमतिपत्रको परीक्षा खुकुलो
भारतलाई दैनिक २ करोड रकम बराबरको बिजुली पैंचो दिदै नेपाल सरकार
October 18, 2021 auther